Uncategorized | NLD
Posted By: mygate wayon: June 08, 2020 In: Uncategorized
၂၀၁၉ ခုနှဈ – ဒီဇငျဘာ ၇ – ရကျနမှေ့ (၉) ရကျနထေိ့ ပွုလုပျသော – Gender & Federalism အလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲ နှငျ့ စကားဝိုငျးဆှနှေေးပှဲ ကို ဗဟိုအမြိုးသမီး လုပျငနျး ကျောမတီ နှငျ...	Read more
Posted By: mygate wayon: July 26, 2018 In: Announcement, News, UncategorizedNo Comments
Posted By: mygate wayon: July 11, 2018 In: UncategorizedNo Comments
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...	Read more
Posted By: mygate wayon: July 11, 2018 In: Article, Media, State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor News, UncategorizedNo Comments
Officials from the State, leaders of armed ethnic organisations, leaders of political parties, local and international special guests, delegates, people watching this event broadcasted throu...	Read more
Posted By: mygate wayon: April 02, 2018 In: State Counsellor, State Counsellor Gallery, State Counsellor News, UncategorizedNo Comments
April 01, 2018 My fellow citizens of our Union, It is now two years that the National League for Democracy (NLD) government, elected by the people, has been in office. Just as I am doing so,...	Read more
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Riikka Laatu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: January 05, 2018 In: UncategorizedNo Comments
ပထမဗဟိုကော်မတီ၊ အဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးနောက် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
Posted By: mygate wayon: January 03, 2018 In: UncategorizedNo Comments
ဒီဇင်ဘာ၃၁ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပထမဗဟိုကော်မတီ၊ အဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီးနောက်၊ မွန်းလွဲ(၁)...	Read more
(၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ပြောကြား ခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နှုတ်ချက်
Posted By: Nld Officialon: June 27, 2017 In: UncategorizedNo Comments
ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့များ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မူဝါဒများနဲ့ ကိုက်ညီစွာ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် (၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက် ပြည်ထောင်စု လွှ...	Read more
72 နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနား
72 နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ကို အမျိုးသား ဒီမိကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ရုံးချုပ် ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ရာ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်	Read more